TTSweet: အန်တီဆွိနှင့် ဖိလစ်ပင်းမမများ ...
Posted by T T Sweet at 3:30 AM
Ko Boyz March 21, 2011 at 4:19 AM
ပြောင်းလိုက်ပါ တီဆွိရာ.. ဂျူရောင်းပွိုင့်က လည်စရာ ပိုများပါတယ်...။ :)
T T Sweet March 21, 2011 at 4:27 AM
ကိုဗိုက် ... အဲလေ ကိုဘကလဲ ခုလဲ ၃၀စီးသွား ၁၀မိနစ်ဆို ရောက်တာပဲ ... မြန်မှမြန် ... ဂျူရောင်းပွှိုင့်ကတော့ မရောက်တဲ့ အပတ်မရှိဘူး ကိုဘရေ ...
ခနွဲ March 21, 2011 at 4:27 AM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ..မှားစရာရှားလို့နော့။ ပထမဆုံး မန့်သွားတယ် တီဆွီ။
PAUK March 21, 2011 at 5:19 AM
ဝက်ဝံလေး March 21, 2011 at 5:49 AM
ပွင့်မြုးဇင် March 21, 2011 at 10:38 AM
လူငှားမရသေးဘူးလားမမ.. ညီမလဲအိမ်ရှာနေတာ.. boon lay ဘက်မှာပဲ.. ဘယ်လောက်နဲ့ငှားမှာလဲဟင်.. myuemyue@gmail.com ကိုပို့ပေးပါလား detail လေးတွေ.. မမကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာရောပေါ့..
အကြံတော်ပေးကျောက် March 21, 2011 at 10:41 AM
နောက်လာငှားမဲ့ သူတွေ ဖြုံသွားအောင မလေးမတွေလို ဆွဲကြိုးက ၁၀ ကုံးလောက်ဆွဲ... ပိုက်ဆံအိပ်ကြီးဂျိုင်းကြားညှပ်...စီးကရက်ကိုခဲ...မျက်စေ့ကို အသာမှေးပြီး မရီချင့် ရီချင် ...အဟင်းဟင်း...ဆိုပြီးတမင်လုပ်ရီသံနဲ့ စကားတွေ ပြောပါလေ......
ကိုဇော် March 21, 2011 at 12:57 PM
ဟိဟိ. .. ဖြစ်ရလေ အစ်မရာ။
ဆုမြတ်မိုး March 21, 2011 at 1:53 PM
ရယ်ရတယ်..တီဆွိ..နောက်တစ်ခါဆို လာတည်းကနေမိတ်ဆက်ပစ်လိုက်..ဒါအိမ်ရှင်ဆိုပြီးတော့..... :P
Mon Petit Avatar March 21, 2011 at 2:02 PM
ဖြစ်မှဖြစ်ရ လေ အစ်မရယ်
seesein March 21, 2011 at 2:10 PM
အိမ်နေရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်စားရတာမျိုးကို ကြိုက်တယ်ဗျ ဖတ်ရင်း ရယ်သွားတယ် ဘကျောက်ကွန်းမန့်ထဲကအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပေါ့ မျက်လုံးထဲ မြင်ယောက်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ရယ်မောသွားတယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 21, 2011 at 2:56 PM
ကိုကြီးကျောက် ကော်မန့်အတိုင်း လုပ်လိုက်ရင် ဒီဖိလင်းပင်း မမတွေ ဖြုံသွားမှာ မြင်ယောင်သေး
ဖမလေးတွေ မြန်မာတွေလောက်မချောဘူးဆိုလို့ သဘောကျသွားတယ်း)း)
အမဆွိ ရေးထားလို ညီမ အဖြစ်ကို သွားသတိရတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကွန်ဒို ၀ယ်တုန်းကပေါ့။ ညီမ ကမောနေပြီ မနက်ကဘဲရောက်ခါစ။ အမေတို့ရွေးထားတဲ့ အထဲက (3) ခုထဲက ဆုံးဖြတ်ပြီး ၀ယ်ရမှာ။ မောလွန်းလို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင် တီရှပ်လေးနဲ့ ပါတိတ်လေးနဲ့ ညှပ်ဖိနပ်လေးနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ပါးပါးလေးနဲ့ ပေါ့။ အမေတို့ က ကြည့်ပြီးသား ဆိုတော့ အိမ်ရှင်က သိနေ တယ်။ အဲ-အမေက ဒီဘက်က ပွဲစားမပါ ခေါ်လာတာ ဟိုဘက်အိမ်ကို ကြည့်ပြီးအပြန်မှာ. ပွဲစားမက ဆီဒိုးနားက မင်္ဂလာဆောင် သွားမဲ့ စတိုင်နဲ့ ဝတ်စားထားတာ ပျံနေတာဘဲ။ အိမ်ရှင်က အဲ့ဒီ့ပွဲစားမကို မသိဘူး၊ အမေတို့ နဲ့ ဈေးညှိရင်းနဲ့ညီမလည်း အဲ့ဒီ့ အခန်းကို ကြိုက်တာနဲ့ မြန်မြန်ပြီးအောင် ကဲ- နဲနဲဘဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်လျှော့လိုက်ပါ။ ကျွန်မက ၀ယ်မဲ့သူပါ လို့ ပြောလိုက်တော့... အိမ်ရှင်က အံ့သြလိုက်တာ မပြောနဲ့ အခုအထိပြောလို့ မပြီးဘူး။ သူတို့ ကထင်တာက ပွဲစားမကို ၀ယ်မဲ့သူ ထင်နေလို့ တဲ့။ ညီမကို ရိုးလိုက်တာ ကြည့်စမ်းပါအုံး ဆိုပြီး အံ့သြနေတာ ၀ယ်ပြီးတော့ သူတို့ နဲ့ ခင်သွားတော့ ပြောလို့ ကို မပြီးနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်အမဆွိ ရေးထားသလို အမြဲတမ်း ကောင်းကောင်း ၀တ်ရမလို ဖြစ်နေပြီနော့် :) ဒုက်ခ ဒုက်ခ...
ကိုကြီးကျောက်ပြောသလိုသာ လုပ်ရင် လူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကတော် ထင်နေပါ့မယ်
T T Sweet March 21, 2011 at 10:03 PM
ပထမဆုံးအကြိမ် လာမန့်သွားတဲ့ ကိုခနွဲ ကျေးဇူး။ နောက်လဲ လာလည်ပါ၊ လာမန့်ပါနော်။
မပေါက် စာမကျေဘူး။ ကျောင်းတက်မမှန်ဘူးရော။ အောက်က ပို့စ်လေးမှာ ရေးထားပါတယ်။
၀က်ကလေး ဆီ မရောက်တာတောင်ကြာပြီ။ လာအားပေးတာ ကျေးဇူး။
မြူးမြူးရေ ... အီးမေး ပို့လိုက်မယ်။ တခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေရှိရင်လဲ ပြောပြလိုက်ပါ။
ကိုကြီးကျောက်ရေးတာဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ။ အနောနိမတ်စ်ပြောသလို တော်နေ လုံးရှပ် (Lone shark) ကတော်ကြီး ထင်သွားဦးမယ်း))
ကိုဇော်၊ ဆုမြတ်၊ မွန်ပြည်သစ်၊ ချော အားလုံး လည်လည်လာတာ ကျေးဇူးပါရှင့်။
စည်းစိမ်ကအရယ်သန်တယ်နဲ့တူတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်ရေးတာမရယ်ရဘူး။ ကိုကြီးကျောက်ပြောတာပဲ ရယ်နေရတယ်။
အောက်ဆုံးက အနောနိမတ်ညီမပြောတာ မှန်တယ်။ ပွဲစားတွေက ဂိုက်ပေးအရမ်းကောင်းတာ။ ခု ဖိလစ်ပင်းတွေဆို ဖိလစ်ပင်း ပွဲစား၊ အိန္ဒိယဆို ကုလားပွဲစား၊ တရုတ်ဆိုလဲ တရုတ်မပွဲစားတွေ အားလုံးအပျံစားတွေချည့်ပဲ။ ဟွန့်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ မရဘူးပဲ။ ကိုကြီးကျောက်ပြောသလိုကို ၀တ်ပစ်လိုက်မယ် ...
It's loan shark, not lone shark
mgchaint March 21, 2011 at 11:26 PM
ဖားများနဲ့ ရေစက်ပဲလို့ ပြောရမလိုပဲ.. အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ နေရာမှာလဲ ဖား ၃ယောက်ရှိတယ်။ တွေ့ဖူးသမျှ ဖားတွေရဲ့ ရုပ်က မြန်မာတွေလို အဆင်မပြေဘူး။ ရုပ်ကြမ်းတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ။ ကိုယ်ကပဲ ဗမာဖြစ်လို ဗမာကိုပဲ မျက်စေတွေ့လို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
အမရေ ကျွန်မက comment မရေးဖြစ်ပေမဲ. ကျောင်းမှန်ပြီး စာကျေတယ်သိလား တခါတလေ ကျောင်းတက်ချင်လွန်းလို. နေ.တိုင်းလာတာ ကျောင်းကပိတ်ထားတယ် ဆရာမက လာဘူး အဲတော.လဲ အရင်စာတွေပြန်နွေးရတာပေါ.
ခေးကို March 22, 2011 at 12:55 AM
ဖတွေက အဲလိုပဲ လူတွေအများကြီးစုနေကြတယ်...ညီမတော့ မကြိုက်ဘူး။
မီးငယ် March 22, 2011 at 4:27 PM
တီတီဆွိရေ ... တောသူမလေးပါ .. ခိခိ .. လည်လည်လာတယ် .. အနော့်အိမ်လေးလည်း လာလည်ဦးနော် .. ဖဦးထုပ်မတွေက ဒီမှာဆို သိပ်မုန်းတာပဲ .. ကဲလွန်းလို့
if you want to comment philippines girl pls make perfect yourself.
after that comment other people.if not better dont. philippines education is now better myanmar. they can talk spanish and english. they are pronunciation is latin america.
before world warII philippines became part of united state of america.
but philippines goverment didn't agree.
သက်ဝေ March 23, 2011 at 12:34 AM
မဆွီတီတို့ကတော့ ဖြစ်ရမယ်... ဒါပေမယ့်လဲ အိမ်မှာနေရင်းတော့ ပွဲသွားသလို ပြင်မထားနိုင်ပေါင်တော်... အဟိ...
ဟိုနေ့က တီဆွိဆီက ယူလာတဲ့ ပန်းပင်လေးက အဖူးလေးတွေ ထွက်လာပြီ သိလား... ပန်းပွင့်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြမယ်နော်...
အဲဒီ အပင်လေးတွေ တွေ့တိုင်း သတိရနေမှာ...
ပြောရင်းနဲ့တောင် လွမ်းလာဘီ.............း(((
mgchaint March 23, 2011 at 11:05 AM
Cool down mate! Anonymous! If you are stand for Philippines, I will tell you that they should read the situation whether she is tenant or owner.
We are not comparing their education system and ours. We are joking about what sweetee's feeling. We really don't care whether they are Spanish or American.
Before you comment, you should learn what is EQ and how to comment positively.
To Anonymous March 22, 2011 2:05 PM :I don't know Philippines education but your English is scary. Even can’t spell correctly and grammar is terrible .Everybody can easily estimate your education level.
T T Sweet March 24, 2011 at 12:00 AM
အန်တီသက်ဝေကတော့ လွမ်းကောင်းအောင် လုပ်နေပြီနော်။ ပန်းလေးတွေပွင့်တိုင်း သတိရနေမှာ ယုံပြီးသား။ ဒါကြောင့်ပေးလိုက်တာ။ ရေမှန်မှန်လောင်းပေးနော်။
တီဆွိ အလင်းလဲ လိုချင်တယ်.. ရှိသေးလားဟင်
T T Sweet April 4, 2011 at 4:08 PM
အလင်းရေ နောက်ကျသွားပြီ။ မနေ့ကပဲ လက်မှတ်ထိုးတယ်။ ပြောပြောက မှ မစောတာနော်။
:( မနေ့ကမှ တီတီသက်ဝေ ပြောနေတာ တွေ့လို့ .. လာမှပဲ ဘယ်က၀ယ်ပြီး ဘယ်လိုပြုစုလဲ မေးတော့မယ်.. :D